डब्लुएचओ महानिर्देशक आज नेपाल आइपुग्दै, उच्चस्तरीय भेटघाटमा रहनेछन् व्यस्त – Health Post Nepal
डब्लुएचओ महानिर्देशक आज नेपाल आइपुग्दै, उच्चस्तरीय भेटघाटमा रहनेछन् व्यस्त
२०७९ वैशाख ८ गते १०:०५
काठमाडौं – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस गेब्रेयसस आज बिहीबार नेपाल आउँदै छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा उनी आज दिउँसो १२:२५ बजे नेपाल आइपुग्दै छन्।
तीनदिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहँदा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नेछन्। त्यसैगरी उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटघाट गर्नेछन्। यस्तै नेपालमा रहँदा उनले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीसहित डब्लुएचओका नेपालस्थित प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नेछन्।
महानिर्देशक तीनदिने सदभाव भ्रमणमा नेपाल आउन लागेका मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जानकारी दिए। भ्रमणकै क्रममा उनले टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ।
महानिर्देशककाे टाेलीमा डब्लुएचओको दक्षिण-पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डा. पुनम क्षेत्रपाल र डब्लुएचओका अन्य अधिकारीहरू रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी वैशाख १० गते नेपालबाट फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।